Jumlada Tayada Sare ee Dhaldhalaalka Foorida Shaaha Kettle 2.2L Makiinada Dhaldhalaalka Fooriyaha Kettle Soo -saaraha iyo Bixiyaha | Maokun
Dhaldhalaalka Tayada Sare ee Biyo -gelinta Shaaha Biyuhu 2.2L Kululeeyaha Dhaldhalaalka Foorida
Xilliga: Xilliga oo dhan
Qaabka Naqshadeynta: Morden Luxury
Tilmaamaha: DIY, La -habeeyay, Qurxinta, Hadiyadda
Logo: Astaanta la habeeyay
Magaca badeecada: Khamriga dhaldhalaalka
Waxyaabaha: Birta kaarboon oo leh dahaarka dhaldhalaalka
Awoodda: 0.8 1.2 1.5 2.0 2.5
1. Nadiif iyo nadaafad, oo aan lahayn biro.
2. In la nadiifiyo way ka sahlan tahay weelasha alaabta jikada, waxaana lagu nadiifin doonaa hal masaas, mana daxalaysnaan doono ama ma madoobaan doono.
3. U qaraabo dheri bir ama dheri. Dhaldhalaalka/dhaldhalaalka ayaa aad ugu deggan kiimikada mana ku dhalaalin doono xeryahooda qaarkood (sida manganese, chromium iyo walxo kale oo waxyeello leh) heerkul sare si looga hortago cunista dadka.
4. Leh dhadhan dhaqameed aad u sarreeya iyo qiimaynta qaddarinta farshaxanka.
1. Ka hor intaan la isticmaalin 1. Dheryaha dhaldhalaalka ama dheriyada dhaldhalaalka ah ee dhowaan la soo iibiyey waa in aan biyo lagu qoyn muddo dheer. Guud ahaan, dhaq oo qoyso 1-2 daqiiqo. Nadiifinta ka dib, fadlan cidhifyada geesaha qalaji waqtiga si aad uga fogaato miridhku.
2. Markaad isticmaalayso dheriyada dhaldhalaalka ama dheriyada dhaldhalaalka ah ee dhowaan la soo iibsaday, fadlan si degdeg ah ha ugu kululayn biyo qabow, si loo yareeyo nolosha adeegga badeecada.
2. Isticmaalka 1. Fadlan ku dar biyo iyo dareere kahor kululaynta, oo maraqa ha ku karkarin si uu u engego inta la isticmaalayo!
2. Markaad isticmaaleyso dheri dhaldhalaalka ah, isku day inaadan isticmaalin mishiinka biraha, malqacadaha, iwm.
3. Dhaldhalaalka waa badeecad jilicsan, sidaa darteed waa in aan si adag loo tuurin si looga fogaado in uu lumiyo weelka.
4. Dhaldhalaalka/dhaldhalaalka ma aha wax sahlan in madow loo noqdo isticmaalka caadiga ah. Haddii ay u gubato madow, kaliya ku masax suufka wax lagu nadiifiyo iyo saabuunta.
5. Dhaldhalaalka waxaa loo adeegsan karaa shooladaha gaaska, makiinadaha wax lagu karsado, iyo shooladda gaaska dabiiciga ah, laakiin looma adeegsan karo foornooyinka microwave.
3. Isticmaalka ka dib, sii qallaji oo nadiifi markaad isticmaasho ka dib, oo si joogto ah u nadiifi gacanka iyo geesaha dheriga si aad uga fogaato samaynta wasakhda madax adag.
Qalab aad u fiican oo si adag loo soo xulay, hab kasta waxaa si adag u kantaroola shaqaalaha xakamaynta tayada, waxay hortaada ku noqon doonaan dheri dhaldhalaalaan oo jilicsan. Shaah galabtii guriga, ku dar khad aad u qurux badan jikadaada ama qolkaaga fadhiga, saaxiibbada hadiyadu waa xulashooyinkaaga wanaagsan, laga yaabee inaad heli karto xilli jacayl lama ilaawaan ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan: saxanka birta kaarboon
Muuqaalka maaddada: dhaldhalaalka
Midabka (sawirka): Martidu waxay caadadooda/sida shaxdu muujinayso
Faahfaahinta iyo cabbirka:
Tirada xirxirida: In ka yar 1.5L24pieces halkii sanduuq, 2.5Lonly18per sanduuq, 3L/4L oo kaliya12per sanduuq
Dekedda: shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo, Qingdao.
Goobta asal ahaan: Zhejiang china
Awoodda dhirta: 10000/maalin
Hore: Enamel Kettle Set Teapot Carbon Steel Enamel Coffee Kettle Shaaha Pot leh Dabool
Xiga: Naqshaddii Ugu Dambeysay ee Shaah Pot Enamel Shaaha Kettle oo Dabool leh
Enamel Coffee Shaaha Set
Dheriga dhaldhalaalka ah iyo digsiyada
Vintage dhaldhalaalka dhaldhalaalka
Weelasha dhaldhalaalka ah
Dheriga Dhagaxa dhagaxa leh
Enamel Shaaha Kettle
Enamel Shaaha Kettles
Dheriga Shaaha Enamel
Vintage Enamel Shaaha Kettle
Iibiyaha ugu fiican Sacuudi Carabiya digsi qaxwada kafeega ...
Enamel Kettle Teapot Carbon Steel Enamel Carabi ...
Shiinaha Factory dhaldhalaalka Coffee Shaaha Set Kettle Enam ...
Enamel Kettle iyo Teapot S/S Rim Floral Design ...
Jumlada 2L dhaldhalaalka dhalada biyo shaaha 2.5L shaaha ...